Vhidhiyo yeECG inoshanda paApple Tarisa | Ndinobva mac
Vhidhiyo yekushanda kweECG paApple Watch
Munguva yezuro masikati vhezheni 5., 1.2 na ECG yeavo vese vakatenga wachi muUnited States uye pakupedzisira hazvigoneke kuti vashandisi vanobva kune dzimwe nyika vave nebasa rinoshanda pamwe neshanduko yedunhu ...
Chero zvazvingaitika, zvinokurudzirwa kugadzirisa nekukurumidza sezvinobvira kuti ugamuchire zvimwe zvese zvekuvandudza se "bhatani" kumisikidza kana kudzima Walkie-Talkie basa kana iyo nyowani mavara mabara akawedzerwa. Chaizvoizvo iyo nyeredzi basa iri mukana wekuita iyo electrocardiogram haiwanikwe kune wese munhu, asi tinogona kuona kuti inoshanda sei mumavhidhiyo akawanda.
Chinhu chitsva ichi chinobatsira kuona kana kubatsira kuona kusagadzikana kwemoyo. Muchidimbu, ibasa rakazvipira kune hutano iro Apple rinotipa iyo yeApple Watch uye kunyangwe isingawanikwe munyika dzese, icho chinhu chinozopedzisira chasvika munguva pfupi inotevera. Asi ngatione kuti zvinoshanda sei:
Izvo zviri nyore sekugadzirisa sarudzo kubva ku iPhone uye wobva wateedzera kurudziro dzekushandisa, isa munwe wako pane korona yedhijitari uye mirira kwemasekondi makumi matatu kuti upfuure kusvikira iwe watiratidza kwekupedzisira kuverenga. Ehe isu tinotarisira kuti ichakurumidza kupfuudza inoenderana zvitupa muEurope uye mune dzimwe nyika uye ichave basa rinowanikwa kupfuura United States sezvo zvichinakidza kuve nemukana wekuita electrocardiogram chero nguva yezuva ne iyo Apple Tarisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Vhidhiyo yekushanda kweECG paApple Watch
Chaja nyowani yeApple C yeApple haienderane neMacs
Nyika nyowani uko zvinokwanisika kubhadhara kutenga kweApplications uye kunyoreswa kubva kune wedu opareta